Faah Faahino kasoo baxaya Weerar toos ah oo saakay lagu qaaaday Hotelka Village ee magaalada... - iftineducation.com
iftineducation.com – Wararka ka imaanaya magaalada Boosaaso ee xartunta gobolka Bari ayaa sheegaya in saakay kooxo hubeesan weerar toos ah ku qaadeen Hotel lagu magacaabo Village oo kuyaala Koonfur Galbeed magaalada Boosaaso.
Dabley hubeesan ayaa saakay aroortii waxa ay rasaas ku fureen Hotelka Village waxa ayna halkaasi ku dileen qaar kamid ah ilaalada Hotelka, waxa ayna gudaha u galeen kooxaha hubeesan qeybo kamid ah Hotelka.
Inta la xaqiijiyay weerarkan lagu qaaday Hotelka Vilagge waxaa ku dhintay lix qof oo labo kamid ah ay ahaayeen ragii weerarka geestay, dadka dhintay ayaa sidoo kale waxaa ku jira ilaalada Hotelka ikyo ciidamo ilaalo u ahaa masuul degnaa Hotelka la weeraray.
Sida aan Wararka ku heleyno Hotelka la weeraray waxaa deganaa Gudoomiyihii hore ee gobolka Bari C/Samad Galan, waxaana raga weerarka ku qaaday dhismaha Hitelka toogtay ilaalada Galan oo dagaal adag la galay ragaasi.
Ciidamada dambi baraista Puntland ayaa la sheegay in ay qaadeen meydka labada nin ee weerarka geestay si ay baaritaano ugu sameeyaan, waxaa sidoo kale socda baaritaano ku aadan halka ay ragan ka yimaadeen dadka soo abaabulay weerarkan.
Weerarkan saakay lagu qaaday Hotelka Vilage ayaa noqonaya weerarkii ugu horeeyya oo noociisa ah oo ka dhaca magaalada Boosaaso, mana jirto ilaa hada cid sheegatay masuuliyada weerarkan qasaaraha geestay.
War Deg Deg Ah : Tirinta Codadka Doorashada oo lasoo gabo gabeeyay (Yaa ku horeeya Codadka)